VaChiwenga, avo vakatungamira mauto mukumanikidza vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kusiya basa mwedzi uno makore maviri apfuura, vakaenda kunorapwa ku China, mushure mekunge vamborapwa mu South Africa muna Chikunguru.
Kuenda ku China kwaVaChiwenga kunorapwa, kwakaziviswa nemutungamiri wenyika, Va Emmerson Mnangagwa.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio7 inoratidza kuti VaChiwenga vakasimuka kubva ku Beijing neChishanu masikati nenguva dza 3:46pm vachishandisa ndege yeBeijing Airlines Flight Number BJN 099, ndege iyi ndeye mhando ye Boing 737-79L (BBJ).
Ndege iyi yakasvika pachitsuva che Male na 9:32pm. Male inhandare iri kumahombekombe kwe India, inova nzvimbo inoshandiswa kuti ndege dzimwe peturu. Ndege iyi yakamira panhandare iyi kwemaminetsi makumi masere nematatu, ikazosimuka nenguva dza 10:55 pm ichisvika muHarare na 2:40am mangwanani eMugovera.
Ndege iyi yava nemakore masere ichishanda, uye yakanyoreswa muChina muna 2011 sendege itsva ichangobva mukugadzirwa.
Veruzhinji vari kuona vhidhiyo pa social media yekusvika kwaVa Chiwenga vazhinji vavo vachiti vari kukatyamadzwa zvikuru kuona pasina vakuru vakuru vakaenda kunotambira mumwe wavo anga achirwara.
Pavhidhiyo iri kutenderera pa social media iyi, VaChiwenga vanoonekwa vachiburuka mundege iyi vachibva vachingamidzwa nemumwe mukuru mukuru kumuzinda weChina muZimbabwe.
Asi hapana makurukota anoonekwa achivatambira, kanawo mudzimai wavo, Amai Mary Chiwenga, havasi kuonekwa muvhidhiyo iyi vachigamuchira murume wayo, izvo zvasiya kudzoka kwaVa Chiwenga kuine mibvunzo yakawanda.
Studio7 yakaedza kunzwa kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa; mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaEnergy Mutodi, pamwe nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, asi vatatu ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo.
Asi VaMangwana vakatumira vhidhiyo pa twitter yavo, vachiratidza VaChiwenga vachisangana naVaMnangagwa kuhofisi yavo, asi VaChiwenga vakapfeka sutu yakasiyana neyavakasvika vakapfeka panhandare yendege.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko, uye vachiongorora nyaya dzematongorwe enyika, VaRashweat Mukundu, vanoti zvagara hazvo mutungamiri wenyika achizivikanwa kuti ndiye anotambirwa nevatevedzeri vake, rwendo rwuno veruzhinji vanga vakatarisira kuona VaMnangagwa vachitambira mutevedzeri wavo sezvo ari munhu ari kubva mukurapwa.
VaMukundu vanoti pane zvakawanda zviri kuitika muhurumende zvinogona kunge zvichikonzera kuti zvinhu zvibude sezvazvaita pakusvika kwaVaChiwenga paRobert Gabriel Mugabe International Airport.
VaMukundu vanoti muZanu PF mune vanhu vanga vava kutarisira kutora chigaro chaVaChiwenga vachifunga kuti nekurwara kwavanga vachiita, havadzoki vari mupenyu.
VaMukundu vanotiwo zvava pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pahukama hweChina nehurumende yaVaMnangagwa zvichitevera kupesana panyaya dzemari dzakapihwa Zimbabwe neChina, idzo China inonzi haisi kufara nazvo.
Svondo rapera, China yakabuda pachena ichiratidza kusafara nemari dzakaburitswa negurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vachiti ndiyo mari yakanga yapihwa nyika neChina apo vakatura hurongwa hwebhajeti regore rinouya muparamende.
Mari yakaburitswa naVaNcube yaive shoma zvikuru pamari yakazoburitswa neChina.
Hurumende yakaburitsa mashoko ekuti ichaongorora zvakaitika asi haisati yabuda pachena ichizivisa nyika kuti seyi yakaburitsa mari shoma iyo iri kupikiswa neChina.